I-Breast Reliever China Manufacturer
Incazelo:I-Manual Manual Ubisi Ingxube Yomzimba I-Breast Reliever Pump,I-Manual Breast Reliever Pump For Baby,Ukudla Ukusebenzisa Umthamo We-Breast Pump
Ningbo Cland Medical Instruments Co., Ltd. I-Manual Manual Ubisi Ingxube Yomzimba I-Breast Reliever Pump,I-Manual Breast Reliever Pump For Baby,Ukudla Ukusebenzisa Umthamo We-Breast Pump
Ikhaya > Imikhiqizo > Izinsimbi Zokuhlinzwa > I-Rubber & Plastic > I-Breast Reliever
I-Model No.: CL-RP0006
Ukupakisha: ngebhokisi eliphakathi, 1pc / ibhokisi, 100pcs / ctn noma 144pcs / ctn, 38 * 38 * 59cm, 8 / 7kgs
Igama lomkhiqizo: I-Breast Reliever
Imininingwane: CL-RP0006 Breast Reliever
1. Izinto: I-Glass noma iPlastiki Base
I-non-toxic and non-fake silicone ibhola ibhola
Ukuklama okukhethekile nokusebenza okulula
2. Iphakheji: ngebhokisi eliphakathi, 1pc / ibhokisi, 100pcs / ctn noma 144pcs / ctn, 38 * 38 * 59cm, 8 / 7kgs
3. Usiza umama osanda kuzalwa ukuba athole ubisi lwebele, angase enze lula ukondla ubisi lomama, ukusebenza kulula, kufanelana nazo zonke izinhlobo zesayizi sebele.
4. Ukuklama okhethekile, ukusebenza kulula, ukuqina kunamandla, kusindisa isikhathi.
5. I-ball ye-pipela ye-silicone ayiyona into enobuthi futhi ayinambitheka, kulula ukuyihlanza noma ukukhipha imishanguzo, ukuphepha nempilo.
6. Ibhola lepump kanye ne-hose yinkampani yomgwamanda womzimba, ayinayo imodemu yokuwa noma ingozi endala.
7. Phonsa ebhodleleni lokudla elenziwe nge-PC grade ukudla.
1. Sicela uhlanganise wonke amamojula emzimbeni ngaphambi kokusetshenziswa komunye.
2. Cindezela ibhola le-silicone, ukubeka indebe yokuncelisa esiswini eduze. Sula bese ucindezela ibhola le-silicone ngokuphindaphindiwe.
3. Ngemva kokuthola ubisi obanele ngokwanele, uthatha idivaysi yokusondeza bese iqondile ukuthatha ukusetshenziswa kwalesi bhodlela ukuguqula ingono kanye ne-screw thread ukuze uphathe abahlengikazi.
4. Ngemva kokusetshenziswa ngalunye, sicela uhlanze wonke amamojula ngokushesha.
1. Geza bese ubilisa inzalo ngaphambi kokuqala nangemva kokusetshenziswa. Uketshezila ngokwe-stterilizer wenza imiyalelo noma emanzini abilayo okungenani imizuzu engu-5. (Qinisekisa ukuthi awuyikhipha imishanguzo ye-pump ibhola).
2. Uma nje kukhishwa, i-mammary gland ingakakhiwa, ingaba ne-milk phenomena encane. Ngemuva kwezinsuku ezimbalwa, isifuba singagcina bese siqala ukufihla ubisi lomama ngaphezu kwesigaba sokuqala, uma sifuna ukusebenzisa ipompo lesifuba, sicela uxhumane nodokotela ozowasebenzisa.
3. I-mastitis noma umhume we-nipple ku-flatnss, sicela ulandele kudokotela noma umbelethisi oyala ukuyisebenzisa. Ngaphambi kokusetshenziselwa, uma uphonsa isifuba noma umboze ithawula elishisayo, kungakhuthaza ukondla ubisi lwamama, kulula ukuheha isifuba.
4. Ngesifuba se-extrusion, akakwazi ukukhipha ubisi lomama, sicela ungasebenzisi lo mkhiqizo ngokuzenzakalelayo, kufanele ulandelele ukuthi udokotela noma umbelethisi uyala ukuba asebenzise.
5. Ukuze ugweme ukuthonya ekuncelweni, qiniseka ukuthi ungalahlekelwa yindandatho yezinsipho lapho uhlanzekile futhi uyiqede. Ngaphezu kwalokho, idivaysi yokuncelisa nebhola kufanele iguquke ifinyelele, uma ikhululekile kakhulu noma ifakiwe kakhulu izoba nomthelela ekuthandeni.
Yonke imikhiqizo izobe ikhwalithi eqondile ihlolwe endlini ngaphambi kokupakisha
Related Products List I-Manual Manual Ubisi Ingxube Yomzimba I-Breast Reliever Pump , I-Manual Breast Reliever Pump For Baby , Ukudla Ukusebenzisa Umthamo We-Breast Pump , I-Breast Reliever , Insimbi Engagqwali Inhliziyo Yomzimba I-Stethoscope , I-Hot Sale Ekhwalithi Enhle I-Best VOLTMETER DC , Imishini yokucindezela i-Steam Sterilizer Equipment , I-Manual Wheelchair Yigcwele